Hlola iToronto, eCanada - World Tourism Portal
Hlola iToronto, eCanada
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eToronto, eCanada
Okufanele ukwenze eToronto, eCanada
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eToronto
Bukela ividiyo ngeToronto
Hlola iToronto idolobha elinabantu abaningi kakhulu ngaphakathi Canada nenhlokodolobha yesifundazwe i-Ontario. Itholakala ogwini olusenyakatho nentshonalanga yeLake Ontario. I-Toronto, enabantu abaningi abayizigidi ezingama-2.6, isenkabeni yeGreater Toronto Area (GTA) equkethe abantu abayizigidi ze-6.2. Idolobha leli liyisikhonkwane sesifunda saseGolden Horseshoe, esigoqa iLake Ontario ukusuka eToronto kuya eNiagara Falls futhi sigcwalisa izakhamizi ezingaphezu kwezigidi ezingama-8.5, cishe ingxenye yesine yabantu baseCanada. IToronto yidolobha lesine ngobukhulu kanye nelesihlanu samazwe amakhulu amakhulu asedolobheni eNyakatho Melika. I-Toronto kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi Idolobha laseNew York yeCanada ngoba umuzwa ojwayelekile wedolobha uyafana noweNew York City, futhi ngenxa yokuthi iToronto bekulondawo oludumile lokufika kwabokufika.
Ihlakazwa ngamadiphozi we-post-glacial alluvial deposits kanye nama-Bluffs, le ndawo yahlalwa ngezikhathi ezahlukene ngabakwa-Iroquois futhi kamuva nabantu baseWyandot (Huron). Ukuxazululwa kwabaseYurophu kwaqala ngokwakhiwa kwesakhiwo saseFrance indawo eyayingahlali isikhathi eside eduze kwamagceke anamuhla we-Exhibition maphakathi nama-1700s, bese sikhula endaweni yokuthengisa yaseNgilandi eyakhiwe emuva njenge-York e-1793 (ibuyela igama eliyi-Toronto ku1834). Kamuva ngekhulu le-19th, lakhula laba ukugxila emasikweni nezomnotho eCanada. Ngenxa yenqubomgomo yezwe yokufudukela kwabantu ngokukhululekile eqala kuma-1960, kanye nezomnotho oqinile walesi sifunda, eToronto emashumini eminyaka amuva nje, iguqulwe yaba elinye lamadolobha ahlukene ngokwamasiko nezokuziphatha emhlabeni. Imiphakathi engaphezu kwezinkulungwane ze-80 imelwe, futhi ngaphezu kwesigamu sabahlali baleli dolobha bazalelwa ngaphandle kweCanada.
Kumboza amakhilomitha angaphezu kwesikwele i-600, iToronto inwebeka amanye amakhilomitha e-32 ogwini lweLake Ontario, futhi ifaka nendawo emaphakathi, yedolobha elizungezwe yindandatho engaphakathi yamadolobha amadala alandelwa yindandatho yangaphandle yamadolobhana asemva kwempi. Umuzi ubekwe ngendlela eqonde ngqo kwigridi kanye nemigwaqo akuvamile ukuthi iphambuke kugridi, ngaphandle uma ezimweni lapho ubuchwephesha bugxambukela khona njengasezandleni, kufakwe iDon River Valley kanye nasezigodini eziphansi zeHumber neRouge ezindaweni ezihlukile zedolobha. . Eminye imigwaqo esemqoka idlulisa igridi kuma-engele.
Isimo sezulu saseToronto sisonke sisohlangothini oluhle futhi izimo ezingaguquki zingalindeleka. Amazinga okushisa aphansi kweDowntown -3.8 ° C (25 ° F) ngoJanuwari, kodwa ukubanda kakhulu okwenzeka enyakatho ngokuvamile kuhlala kungaphansi kwesonto ngasikhathi sinye. Ngaphandle kwalokhu, woza uzilungiselele. Ubusika busabanda futhi bunamafu kakhulu, kwezinye izikhathi kuneqhwa futhi kunomoya omethezekile futhi kwezinye izikhathi, kumanzi.
Idolobha lihlangabezana nezikhathi zasehlobo ezifudumele nezinomswakama ezinesilinganiso esiphakeme se-27 ° C (80 ° F) kanye ne-18 ° C (65 ° F) ephansi ngoJulayi / Agasti, kusihlwa kakhulu kusihlwa, kepha akufisi ukushisa okweqile.
Izikhathi ezinhle zokuhambela zesimo sezulu ngasekupheleni kwentwasahlobo / ekuqaleni kwehlobo noma ekuqaleni kokuwa, kanye nobusuku obumnandi kanye nezixuku ezingatheni. Mid-ehlobo yisikhathi esiphakeme sabavakashi, kodwa izivakashi zizothola ukuthi ukuhamba kweToronto kudlulela ebusika bonke ngama-rinks angaphandle eqhwa futhi kuqoqwe izikhulu zeqembu. Isimo somoya kanye nokushisa kuyinto ejwayelekile ezakhiweni zomphakathi zaseToronto.
Isikhungo Sokwaziswa Kwezohambo e-Ontario, i-20 Dundas St W (eYonge ngaphakathi kwe-Atrium eBay; Subway: Dundas. M-Sa 10AM-6PM, Supm-5PM.
Isikhumulo sezindiza i-Toronto Pearson International sise28km (17 miles) enyakatho nentshonalanga yedolobha futhi sisebenzela izindiza ezinkulu kakhulu.
Lapho usufikile, izinketho zakho zokuhamba emhlabathini zifaka irenti yezimoto (wonke ama-majors), izinto zokuhamba zomphakathi (i-UP Express, i-TTC, i-Brampton Transit, i-MiWay, i-Go Transit), izinsiza ze-van-town-based-taxi, amatekisi, ama-limousine, kanye nokuhamba izinsiza zokuhanjiswa ngu-Uber noLyft.
I-UP (Union Pearson) Express, isitimela sesimanjemanje esikuyisa edolobheni laseToronto ngemizuzu ye-25, njalo ngemizuzu ye-15. Ihamba isuka ku-5: 30am iye ku-1: 00am nsuku zonke.
I-TTC (iToronto Transit Commission), iyisistimu yokuhamba yomphakathi eyinhloko eToronto futhi isebenza ngemigwaqo emithathu yamabhasi ukusuka eTheminali 1 nase3.
I-Go Transit, iyisevisi eyibhizinisi eyingqayizivele ese-Ontario futhi isebenza ngemizila emibili yamabhasi ukusuka ku-terminal 1.
IMiWay uhlelo olukhulu lwendawo lokuhamba umphakathi eMississauga futhi isebenza ngemigwaqo emithathu yamabhasi ukusuka esikhumulweni sezindiza
Amatekisi kanye ne-Airport Limousines angakuhambisa nomaphi lapho ufuna ukuya khona. Ungabathola ezingeni lokufika kwanoma yisiphi isinali. Ukuze uphephe, gwema ukuqasha abashayeli becela ngaphakathi kwama-terminals noma ukukucela ukuthi ubalandele ukuya egaraji lokupaka noma enye indawo. Zonke izimoto zinelayisense ephelele yokuqinisekisa ukuthi ziyahlangabezana nezidingo ezithile zokuphepha nokuthi ukhokhiswa intela efanelekile nengaguquki.
U-Uber noma uLyft bangakuyisa noma kuphi endaweni eyi-Greater Toronto Area. Udinga ukuthi izinhlelo zazo zokusebenza zifakwe ocingweni lwakho nama-akhawunti asethelwe ukusebenzisa izinsizakalo zawo, futhi uma ungenayo idatha yeselula, ungaxhuma kwi-Wi-Fi yamahhala yePearson Airport.
Isiteshi esikhulu samabhasi eToronto, iToronto Coach Terminal (eyaziwa nangokuthi yiBay Street Terminal noma iMetro Toronto Coach Terminal), isetshenziselwa ukuhamba komqeqeshi futhi kutholwa iGreyyhound, Umqeqeshi waseCanada, New York Trailways, nase-Ontario Northland.
Imigwaqo emikhulu eToronto ibekwe ngephethini yegridi elenza elinye lamadolobha alula ukuzithola ngemoto. Ukusuka endaweni ethile kuya endaweni ethile edolobheni kungafinyelelwa ngokujika nje ezimbalwa. Ukupaka enkabeni yedolobha kungabiza futhi kube nzima ukuthola, kepha kuningi futhi akubizi noma kumahhala kulo lonke idolobha. ICanada ishayela ngakwesokudla.
IToronto inkulu, futhi imigwaqo eminingi ihamba amabanga amade kakhulu. Ujantshi wesitimela, ujantshi wesitimela ongaphansi komhlaba, kanye nezinsizakalo zokuhamba ngesitimela kuhlanzekile futhi kuyasebenza kepha kugcwele abantu, nokho kungenzeka ukuthi uzungeze iToronto ngaphandle kwemoto, ikakhulukazi idolobha. Ungakuthola kushesha futhi kulula kakhulu ukukushayela, kodwa wazi ukuthi ukugcwala kwethrafikhi kunamandla cishe ngasiphi isikhathi sosuku, ikakhulukazi phakathi nehora lokujaha. I-Toronto inamakamelo amaningi okupaka izimoto edolobheni, iningi lawo lingakhonjwa yizimpawu ezivelele zohlobo lwe-P, kodwa ziyabiza kakhulu, ikakhulukazi phakathi nezinsuku zaphakathi nesonto. I-Toronto isendaweni engela enyakatho yezwe, kepha amamephu amaningi adonswa maqondana nolwandle. Lokhu kwesinye isikhathi kubizwa ngokuthi yiToronto North.
bezinto zokuthutha umphakathi
I-Toronto inohlelo olukhulu kakhulu lokuhamba, olwesithathu olusetshenziswa kakhulu eNyakatho Melika (ngemuva kweNew York City kanye Mexico City). Inamabhasi, izitaladi, imigqa yangaphansi komhlaba, kanye nomugqa we-quari-subway Scarborough Rapid Transit. Amabhasi nezitaladi zemigwaqo zivame ukubanjwa emgaqweni odume kakhulu waseToronto ngezikhathi zokujaha, yize eminye imigqa yezezimoto inemigwaqo enikelwe.
Uhlelo lwangaphansi komhlaba luyashesha futhi luyasebenza; imigqa engaphansi komhlaba inwebeka kahle ingena emadolobheni amancane futhi ikhuthaze ubungako obukhulu, ukukhula okuphezulu ezindaweni ezingamakhilomitha akude obekungenakuba nentuthuko enkulu. Isibonelo sokuqala salokhu ingumakhelwane weNorth York, ogcwele intuthuko ephezulu phezulu kweziteshi ezintathu zangaphansi komhlaba. Ngenxa yalokhu, indlela ehamba emgodini iyindlela elula, esheshayo futhi esebenza kahle yokuthola idolobha. Ngokungafani namadolobha amaningi, imigqa engaphansi kukaToronto inezinsizakalo ezivame kakhulu, ngisho nasebusuku kakhulu. Izitimela ziza njalo ngemizuzu emihlanu noma okungcono ukusuka ku-5: 30 am to 1: 30 am nsuku zonke zeviki ngaphandle kwangeSonto, lapho inkonzo iqala e-8 am
I-TTC isebenza inethiwekhi ephelele yemizila yamabhasi ebusuku nemigwaqo ebizwa ngokuthi i-Blue Night Network. Insizakalo isebenza ngezikhathi zomzuzu ka-30 kusuka ku-1: 30 am to 5: 00 am Imizila yasebusuku ibalwa kusukela ku-300, bese imiswa ngenkonzo yobusuku bonke ibe nebheji le-24hr ephezulu phezulu.
Baningi abahamba ngebhayisekili abayitoho ngaso sonke isikhathi kanti ukuhamba ngamabhayisekili kuyashesha: umnyango nomuzi, kulo lonke elaseToronto yedolobha, ibhayisekili lishayela imoto noma lihamba cishe njalo.
Idolobha lihlala liyisicaba, ngaphandle kokukhuphuka okuvamile ukusuka eLake Ontario nasezindaweni ezihlotshiswe ngokujulile, ezinamahlathi i-Don Valley kanye neHumber River Valley, futhi nezikhala ezivaliwe ngemuva kokukhala ziyatholakala kulo lonke idolobha. Kunemizila eminingi yokuhamba ngebhayisekili kuphela emigwaqweni emikhulu nokufaka imicu ezindaweni ezahlukene nasemapaki. Idolobha lishicilela imephu yokuhamba ngebhayisikile, etholakala kuwebhusayithi yedolobha.
Kungumthetho wesifundazwe ukuthi abashayeli bamabhayisekili ngaphansi kwe-18 kumele bagqoke isigqoko, futhi bonke abagibeli kufanele babe nebhayisekili elinezinto ezibonisa ukukhonkotha kanye nentsimbi. Lokhu kuvame ukuphoqelelwa kuphela uma amaphoyisa enza i-cycling blitz yawo wonyaka.
Njengoba iToronto idolobha elikhulu kakhulu futhi izindawo eziningi zedolobha zisetshenziswa ngokungafanele ngohlelo lokuhamba komphakathi, imoto iyindlela esetshenziswa kakhulu yokuhamba eMgwaqweni iGreater Toronto.
Yini ongayithenga eToronto
Iningi labantu baseCanada aliphathi imali enkulu yokusetshenziswa kwansuku zonke, lithembele kumakhadi alo wesikweletu, kuma-ATM namakhadi okudonswa kwemali eqondile. Amasheke omuntu awemukelwa neze. Futhi, izindawo eziningi eToronto zamukela amaDola aseMelika ngemicimbi emincane- nge-1 enzima: Izinga lokushintshana le-1.
Amanani wokushintshana we-ATM ye-Interbank ngokuvamile ashaya amasheke omhambi noma eshintshana ngemali yakwamanye amazwe. Izimali ze-ATM zaseCanada ziphansi ($ 1.50 to $ 2 transaction), kepha ibhange lakho lasekhaya lingakhokhisa enye imali ngaphezulu kwalokho.
Amakhadi we-Visa, MasterCard, American Express kanye ne-JCB amukelwa kabanzi eCanada. Amakhadi wesikweletu angakutholela intuthuko yemali kuma-ATM asebhange, ngokujwayelekile ukuthola i-3%. Qaphela: amakhadi amaningi wesikweletu asuselwe e-US manje aguqula amashaji aphesheya asebenzisa amanani wokushintshana angathandeki nezindleko.
Okufanele ukudliwe - isiphuzo eToronto
Ngokwesimo esiphuthumayo, shayela i-911 (ungayishayela ngocingo olukhokhelwayo ngaphandle kokufaka noma yiziphi izinhlamvu zemali).
Njengesivakashi, kungenzeka futhi ukuthi uthenge iSIM khadi ekhokha njenge-pay-as-you-go yefoni yakho ye-GSM. Akukho ukushoda kwezitolo zezingcingo eziphathwayo futhi ukuvakashela izitolo ezahlukahlukene ze-3-4 kufanele kukunikeze umbono wokuthi yini etholakalayo.
I-Toronto idolobha elinamakhofi amaningi e-inthanethi, ikakhulukazi ku-Yonge Street ezungeze iBloor, futhi nakuBloor Street phakathi kweSpadina neBathurst. Akunzima ukuthola indawo ongayibiza ekhaya futhi izindleko zisukela ku- $ 3 ngemizuzu ye-30. Ukutholakala kabanzi kokuthola i-inthanethi okushesha ngesivinini esikhulu kusho ukuthi amakhofi e-inthanethi asephenduka into yesikhathi esedlule, ngakho-ke uma uvakashela amadolobha ephindelela, ungathola ukuthi lowo owasebenzise okokugcina wanyamalala. Amahhotela amakhulu amaningi anikezela nge-inthanethi eshesha kakhulu emagumbini abo nasezikhungweni zabo zebhizinisi. Ngaphezu kwalokho, izitolo eziningi zekhofi ezizimele eToronto zinikezela nge-Wi-Fi yamahhala kumakhasimende abo, njengoba kwenza amaketanga amakhulu njengeTim Horton's, INdebe Yesibili, i-Starbucks.
I-Toronto iphephile ngokumangazayo futhi imigwaqo igcwele abantu abahamba ngezinyawo nabahamba ngamabhayisekili, ngisho nasezindaweni eziningi ebusuku. Uma usebenzisa ukuqonda okuvamile, akufanele ube nenkinga nakancane.
Izinga lobugebengu elinobudlova kulo lonke Canada, futhi ikakhulukazi eToronto, iphansi kakhulu kunaleyo etholakala emadolobheni amakhulu e-United States nangaphansi kwesilinganiso kwamanye amadolobha amakhulu aseCanada asentshonalanga. Kuleminyaka eyishumi eyedlule, kube nesilinganiso esingaphansi kwama-70 ama-Homicides ngonyaka, okuyisilinganiso esingaphansi kwesithathu nge-100,000. Udlame lwezigelekeqe oluhleliwe luyenzeka kepha belulokhu lukhona kakhulu kusukela kukhuphuka phakathi kweminyaka eyishumi edlule. Ubugebengu bezilwane ezifuywayo ngokuvamile akuyona inkinga enkulu eToronto, kepha njengokuhlala njalo, qaphela izinto zakho futhi uvikele ukugcina izinto ezibalulekile emaphaketheni angaphandle. Ukwebiwa kwezimoto nokuhamba ngebhayisekili kuqhathaniswa namanye amadolobha amakhulu aseNyakatho Melika nezimoto eziningi ezintshontshiwe zivunguza zithunyelwa phesheya.
Isifunda saseNiagara - Isifunda esinamakhaza esaziwa ngokuyinhloko ngezivini zaso kanye nezimpophoma ezinokuduma kwezihlahla zaseNiagara Falls nedolobha elihle laseNiagara echibini. Cishe amahora we-1 kuya emahoreni e-1.5 aseningizimu ne-QEW.
Buffalo - ukwakhiwa okuhle kwe-20th Century kwakudala okuhle kubandakanya umsebenzi othile kaFrank Lloyd Wright neminyuziyamu emihle kumane nje kuyindlela yokuhamba ngehora nge1.5 ukusuka eToronto. Kukhona nenqwaba yezitolo ezitolo eziseduze nalapho.
I-Niagara Escarpment - Umsuka womhlaba, ovikelwe ngumyalo we-UN ogeleza usuka ezimpophomeni zaseNiagara uye entshonalanga naseHamilton wabe usenyakatho uye eGeorgian Bay. Imbozwe yihlathi elinokubukwa okuphezulu kwethafa eceleni kweBruce Trail enqenqemeni lomngcele osentshonalanga neGrand Toronto Area, endaweni esiseduzane kakhulu cishe engaba ngehora lehora le-1 / 2 ukusuka empumalanga yeToronto.
Isifunda saseWaterloo - le ndawo eyi-1 kuya emahoreni angama-1.5 entshonalanga neToronto inamakhampasi amakhulu asenyuvesi, amagquma wepulazi namasiko amaMennonite.
IStratford - leli dolobha elihle lama-2 amahora asentshonalanga kweToronto lisingethwe uMkhosi weStatford Shakespeare odume umhlaba wonke (Ephreli-Novemba).
IPrince Edward County - Lesi siqhingi esihle sasemakhaya esisogwini olusenyakatho-nasempumalanga yeLake Ontario siya ngokuya siqashelwa izivini zaso, indawo enhle nokudla okuhle.
I-Islands Islands neKingston - le ndawo ebabazekayo kanye nedolobha layo elingokomlando eliseduze amahora angama-2.5 asempumalanga, esendleleni eya e-Ottawa.
Ottawa - Inhlokodolobha yaseCanada imayelana nehora lamahora e-4 ukusuka eToronto.
Montreal - IMontreal ikude ngokwedlulele, kepha isasebenza njengamahora ayisithupha okushayela (noma uhambo olude lwehora lesitimela se4.5) ukusuka eToronto.
IMuskoka, iGeorgian Bay kanye ne-Kawarthas - Zonke ezindaweni ezisebangeni lama-1.5-2 amahora asenyakatho yizindawo zasemakhaya ezinamadwala nemigwaqo enamagquma enamakhulu amachibi nemigwaqo yamanzi. AmaMuskokas namaKawarthas ayaziwa ngemihlaba yawo, izindlu zokuhlala, izindawo zokuphumula / izindawo zokuphumula, amapaki ezifundazwe, kanye nengcebo yemisebenzi yangaphandle ehlanganisa ukukhempa, ukudoba / ukuzingela, ukuqokomisa iqhwa, ukubuka imvelo nokuhamba ngezinyawo phakathi kobuhle bemvelo. Indawo yaseGeorgia Bay yilapho indawo enezintaba namagquma aseNiagara Escarpment ahlangana khona ngasogwini lwayo, le ndawo inezindawo ezidume kakhulu zokushushuluza umhlaba ezigcwele kakhulu izintaba zeqhwa kodwa amabhishi aseWasaga Beach, ama-wineries kanye negalofu kuyindlela yokukhetha ehlobo.
Abantu abaningi bavakashela lezi zifunda ukuthola amaqabunga amahle kakhulu wombala wokuwa noma kuphi emhlabeni.
Kukhona futhi amabhishi anesihlabathi segolide agudle amanzi acwebile Amawa Amakhulu Akulungele izinsuku zasehlobo ezishisayo. Izindawo ezingodumo ezisolwandle ngaphakathi kwe-1.5 - amahora we-2.5 eToronto afaka iWasaga, iSauble Beach, iSibbald Point Provincial Park, iSandbanks, iGrand Bend, iLong Point, neTurkey Point.